Ukulawulwa Kwekhwalithi - Micvd.com
Umklamo wethu womshini ubuchwepheshe obuphezulu, uvumelane nobuchwepheshe baseYurophu, Melika neTaiwan
Amaponi ethu womshini wethu aqhamuka kumkhiqizo odumile wamazwe angaphandle ekuqaleni, uthanda i-AirTAC, i-panasonic, i-Nokia nokunye.
I-1, Isiqiniseko semishini esinikezwa yinkampani yethu isetshenzisiwe esisha usebenzisa i-design yakamuva kanye nezinto ezifanele ezenziwe, futhi kuzo zonke izici zihlangabezana nokucaciswa kwekhwalithi kanye nokusebenza okushiwo kwinkontileka.
I-2, Isiqinisekiso senkampani esihlinzekwa yimishini ngemuva kokuqondisa kwayo okulungile kuyo yonke uhlelo lwesistimu izinsuku ezingu-3 ngemuva kokufakwa nokulungisa, ukufeza izinkomba zokusebenza zomkhiqizo.
I-3, isiqiniseko senkampani yethu esikhathini esiqinisekisiwe sekhwalithi esinikezwe enkontileka, inqubo yokwakha yokuhlinzeka ngemishini yokufakelwa kokufakelwa ukulungisa noma ukukhubazeka kwezinto ezibonakalayo nakho konke okubangelwa umthwalo wemthengisi kubhekene nanoma yikuphi ukukhubazeka emgqeni wokukhiqiza wephutha nomonakalo.
I-4, Isikhathi sonke sokuqinisekisa ikhwalithi yomshini wokwenza umkhiqizo wezinyanga ze-12 ngemuva kokwamukelwa. Uma kutholakala esikhathini sokuqinisekisa ikhwalithi, ikhwalithi yezimpahla noma incazelo futhi ayihambisani nezinhlinzeko zesivumelwano, noma ukufakazela ukuthi izimpahla ziyiziphambeko (kufaka phakathi amaphutha okungenzeka noma ukusetshenziswa kwezinto eziphansi, njll), umthengi unelungelo lokusho ngesitifiketi sokuhlola esikhishwe umnyango wezomthetho wezimpahla ngaphakathi kwesikhathi sokuqinisekisa ikhwalithi yesikhungo sokwelapha abathengisi sithunyelwa phambili.
I-5, Inkampani ekwenzeni ikhwalithi yomkhiqizo ezindaweni zokusebenza ezisetshenziselwa ukuhlinzeka ngempahla kanye nokuqinisekiswa komshini wokusetshenziswa komkhiqizo.
Isitifiketi sokuhlola esingu-304SS
Isitifiketi se-CE somshini wokugeza amabhodlela othomathikhi
Isitifiketi somshini we-capping
Isitifiketi somshini wokugcwalisa